ऋण खोजेर लघुजलविद्युत् सुचारु,फाईदा कति हुन्छ अब ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उर्जा > ऋण खोजेर लघुजलविद्युत् सुचारु,फाईदा कति हुन्छ अब ?
ऋण खोजेर लघुजलविद्युत् सुचारु,फाईदा कति हुन्छ अब ?
गोरखा । गोरखाको लापु गाविसका स्थानीयवासीले भूकम्पले क्षति पुर्याएको नौलीखोला पहिलो लघुजलविद्युत् आयोजना ऋण खोजेर पुनःनिर्माण गरेका छन् ।
घर÷घरबाट रु पाँच÷पाँच हजारका दरले स्थानीयवासीले पैसा जुटाएपछि १० किलोवाट क्षमताको लघुजलविद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्पन्न भएको उपभोक्ता समितिका सदस्य जीव गुरुङले बताए ।
अठार महिनाअघिको भूकम्पले खोलाबाट आयोजनासम्म पानी ल्याउने कुलो तथा विद्युत्को पावर हाउसमा क्षति पु¥याएको थियो । ऋण खोजेको पैसाले आयोजना मर्मत गरेपछि विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि गाउँ उज्यालो भएको गुरुङले बताए ।
उक्त विद्युत् लापु गाविसको वडा नं २, ५ र ९ वडाका १०० टहरोमा जडान गरिएको छ। विद्युत् सुचारु भएपछि गाउँले खुसी भएका छन् । बिद्युत्का कारण कुटानीपिसानी गर्न, रेडियो सुन्न, टिभी हेर्न र टेलिफोनका टावर सञ्चालनमा सजिलो भएको छ । त्यस्तै उज्यालोमा बसेर विद्यार्थीले पढ्न पाएका छन् । विद्युत् अवरुद्ध हुँदा गाउँलेले सल्लाको दियालो, मट्टितेल राखेर टुकी बत्ति बाल्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
रु चार लाख लगानी गरी विद्युत् आयोजनाको मर्मत गरिएको हो । जिविस गोरखासँग आयोजना मर्मतका लागि बजेटको माग गरिए पनि नपाएपछि गाउँलेले आफैँ आयोजनाको मर्मत गरेका हुन् । भूकम्पले क्षति पु¥याएका ३० भन्दा बढी लघुजलविद्युत् आयोजना बजेट अभावले मर्मत हुन सकेका छैनन् ।
प्रकाशित मितिः २०७३ कार्तिक १७
२०७३ कार्तिक १७ गते १५:२० मा प्रकाशित
मुखर्जीको स्वागतमा पोखरा झक्की झकाउ
खेल्दा जुवातास,सत्ताइस जुवाडेको हिरासतमा बास !
१६ अर्बको हकप्रद सेयर आउँदैछ, को को हुनेछन् मालामाल, हेर्नुहोस्
टाटा मोटर्सको एस होपर टिपर नेपाली बजारमा
नेप्सेमा तीन कम्पनीको बोनस शेयरको मूल्य समायोजन, कुनले कति तोक्यो ?